Spatial Sand washer
article from: sand washer | | fotoana: Aprily, 2013 | tag: sand washer
Ny milina fanasan-damba sandoka Xuanshi dia karazana ampiasaina amin'ny fanasana, drainage, fametrahana sy ny fahalotoana hamafa ny asa ao amin'ny metallurgy, fananganana fitaovana, fitaovana fantson-drano fantsom-pitotoana rano sy herinaratra. Azo ampiasaina amin'ny fanasana ny haben'ny vatana sy ny vovo-tsakafo. Noho ireo toetra mampiavaka azy amin'ny indostria maro dia efa nampiasaina betsaka. Spiral Sand Washer Performance and Features: 1. Rafitra tsotra, haingam-pandrefesana, fihenan'ny herinaratra. 2. Modely maro ... hamaky bebe kokoa...
Ny milina fanodinana gilasy Xuanshi dia ampiasaina amin'ny famokarana fasika ary ny asa fanasan-gaza voajanahary tsy azo ianteherana. Izany dia ampiasaina amin'ny fananganana, ny angovo, ny orinasa glasy, ny tobin-tsolika, ny tohodrano, ary indostria maro hafa. Vitsy kely, ny fahaverezan'ny sandan'ny famatsiana, ny haingon-tsakafa sns. Ny haavon'ny haavo, madio sy haingam-pandehanana avo indrindra mba hahatonga azy io ho bebe kokoa amin'ny fampiasana amin'ny fanadiovana, fametrahana, ny tsy fahampian-tsakafo ary indostrian'ny sandan'ny orinasa. Kilalao fanodinam-bozaka ary ... hamaky bebe kokoa...
Fiara Sand Wash Sand
Fampahafantarana: Araka ny efa fantatry ny rehetra, mila trano maromaro tokony hiorina amin'ny fanatanterahana ireo fepetra mitranga. Tsy isalasalana fa ny lanja madio dia mitana toerana lehibe eo amin'ny fananganana drafitra. Ny fomba hahazoana ny sandandroka dia ny hevi-dehibe ho an'ny mpivarotra. dia manolotra ny masinina fanariam-pako lehibe mba hanomezana fahafaham-po ny filàna famokarana. Ny fitaovana fanasan-danja sandan'ny seranana XSD dia karazana fitaovana fanadiovana ny haavon'ny haavon'ny tany iraisam-pirenena ho an'ny fasika sy ny pelettes, izay novolavolaina tamin'ny ba ... hamaky bebe kokoa...
LXS Series Sand Washing Machine Fampidiran-drakotra fanasan-davenona sandoka dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny fanodinana fasika, famokarana herinaratra, toeram-piompiana sy toeram-panorenana, sambo isan-karazany ary midadasika. Ity fantson-drano ity dia manosika ny firindran'ny 15, eo ambany rano, misy takelaka telo miorina ao anaty dobo filomanosana, ny loha fanala dia tafiditra ao anatin'io dobo filomanosana io. Ao ambany sedi ... hamaky bebe kokoa...
Sand Washing Machine Introduction dia mpanamboatra fiasa manasa sandan'ny sandany. Ny fitaovana fanadiovana sandoka XSD dia karazana fitaovam-panadiovana miaraka amin'ny teknolojia avo lenta avo lenta ho an'ny fasika sandoka sy pelettes, miorina amin'ny fampidirana teknolojia miavaka avy amin'ny vokatra mitovy amin'izany. Ny milina fanasan-dranona sandoka dia ampiasaina amin'ny fanadiovana ny fitaovana any amin'ireto indostrialy manaraka ireto: fambolena, mineraly, fitaovam-panorenana, fitaterana, indostrialy simika, tondra-drano ... hamaky bebe kokoa...